Nbudata Virtavia F-22A Raptor FSX & P3D - Rikoooo
downloads 42 538
N'ihi na FS2004 version pịa ebe a
Ikenyeneke mbiet fighter na multiple textures na ụdị. Quality ex payware now maka free. -Agụnye omenala na-ada, omenala gauges na mmekọrịta virtual kokpiiti na 2D panel, na-enwe egbe ala mmetụta (lee readme.txt).
Martin / Boeing F-22 Raptor Lockheed bụ otu oche, ụgbọ elu ejima ejiri ígwè na-arụ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke ọgbara ọhụrụ. Edebere ya dị ka onye na-agbanye elu ikuku, mana o nwere ike ndị ọzọ na-agụnye agha ala, agha kọmputa, ma gosipụta ọrụ ọgụgụ isi. Lockheed Martin Aeronautics bụ onye na-arụ ọrụ nke ọma na ọ bụ ọrụ maka ọtụtụ ụgbọelu, usoro agha na mgbakọ ikpeazụ nke F-22. Onye na-akwado Boeing Defence, Space & Security na-enye nku, aft fuselage, ntinye elu nke ụgbọ elu, na usoro ọzụzụ.
Na ụgbọ elu e iche iche ẹkedọhọde F-22 na F / A-22 n'oge afọ tupu chie abanye USAF ọrụ na December 2005 dị ka F-22A. N'agbanyeghị a protracted na oké ọnụ development oge, na United States Air Force weere na F-22 a dị oké egwu akụrụngwa nke US kenkwucha ikuku ike ya, na-azọrọ na ugbo elu bụ unmatched ọ bụla mara ma ọ bụ na atumatu olu fighter. Lockheed Martin azọrọ na Raptor si Nchikota stealth, ọsọ, kraiptographi, nkenke na situational mmata, jikọtara na ikuku na-ikuku na ikuku na-ground ọgụ ike,-eme ka ọ kasị mma n'ozuzu fighter n'ụwa taa. Air Chief Marshal Angus Houston, bụbu Chief nke Australian Defence Force, kwuru na 2004 na "F-22 ga-kasị pụta ìhè fighter ụgbọelu mgbe wuru."
The elu na-eri nke ugbo elu, a enweghị doro anya ikuku na-ikuku ọgụ ọzọ n'ihi igbu oge na Russian na Chinese ise-emana fighter mmemme, a US iwu mgbochi mbanye na Raptor na-ebupụ, na-aga n'ihu mmepe nke zubere dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ vasatail F-35 rụpụtara na oku na-akwụsị F-22 mmepụta. Na April 2009, na US Department of Defense chọrọ kwusi ịtụkwasị ọhụrụ iwu, n'okpuru congressional ihu ọma, n'ihi na a ikpeazụ ị nweta tally nke 187 arụmọrụ ugbo elu. The National Defense ikike Act maka gbasara ego obodo afọ 2010 kọrọ ego maka inwekwu F-22 mmepụta. The ikpeazụ F-22 akpọrepu anya nzukọ akara na 13 December 2011 n'oge a na-eme n'ụlọ Dobbins Air Base Reserve.
Ebe ọ bụ na 2010 na F-22 e otiti site na ha na-edozilighị nsogbu na ya pilot oxygen usoro nke so kpata otu okuku na ọnwụ nke a pilot. Na 2011 na nsoro na ebe maka ọnwa anọ tupu resuming ụgbọ elu arụmọrụ, ma akụkọ nke oxygen usoro mbipụta nwere aka iso. Na July 2012, ndị Air Force mara ọkwa na hypoxia-dị ka ihe mgbaàmà nwetara e mere site na-ezighị valvụ na-akwọ ụgbọelu 'mgbali vest; valvụ dochie na mgbanwe filtration usoro E tinyekwara. (Wikipedia)
Ndị na-akụ azụ Hawker Hunter FSX & P3D
Mega Mig-29 Mega FSX & P3D
F-8 Chọrọ Crusader FSX & P3D 2